Fahafinaretana 32 mahafinaritra an'i Dr. Seuss Teny nofonosina lesona lehibe amin'ny fiainana - Quotes
Fahafinaretana 32 mahafinaritra an'i Dr. Seuss Teny nofonosina lesona lehibe amin'ny fiainana
Alao sary an-tsaina ny fahazazanao. Mifantoha amin'ireo tantara natory tadidinao. Inona no hitanao? Boky Dr. Seuss angamba?
Ho ao amin'ny orinasa tsara ianao raha izao no nolazainao - Tombanana ho sasany izany antsasaky ny miliara ny bokiny dia amidy nandritra ny taona maro.
Na The Cat in the Hat, Green Eggs and Ham, The Lorax, na iray amin'ireo bokiny 40+ hafa dia tsy misy fahazazana feno raha tsy misy fatra mahazatra ny Seusstastic hatsarana.
Ireo andinin-teny an-tononkalony sy ilay sary an-tsary voafintina tonta miaraka aminy dia tsy vitan'ny mahafinaritra fotsiny ny mamaky azy, fa misy lesona maro tsy voatanisa ao amin'ny fiainana. Ireo dia tsy mampianatra ankizy kely fotsiny, na dia misy olona amin'ny vanim-potoana rehetra aza afaka mianatra be dia be avy amin'ireo hafatra voarakitra ao anatin'ny tantara tsirairay.
Te hanana an'ity fampianarana lalina ity amin'ny endrika voafehy ve ianao? Jereo avy eo ireto 32 nindramina nataon'i Dr. Seuss ireto ary miomàna hampitsoka ny sainao.
Misy atidoha ao an-dohanao.
Manana tongotra ny kiraronao.
Azonao atao ny mitondra ny lalana alehanao.
Ary fantatrao izay fantatrao.
Ary IZAO no hanapa-kevitra ny amin'izay halehanao.
(Oh, ireo toerana alehanao!)
Ny lesona: manana fahefana hamaritra ny ho avinao ianao. ianareo fantaro tsara ny tenanao noho ny olona rehetra, ary safidinao ny lalana alehanao amin'ny fiainana. Manana ny talenta ianao, manana ny fomba hivezivezena araka izay irinao ary ianao no manana ny teny farany momba ny anjaranao.
Mieritrereta ankavia ary misaina tsara ary mieritrereta ambany ary mieritrereta ambony.
Oh, ny eritreritra dia afaka mieritreritra ambony ianao raha manandrana fotsiny!
(Oh, ny eritreritra azonao eritreretina!)
Ny lesona: ny fisainanao dia zavatra mahatalanjona ary tokony hampiasainao matetika araka izay tratranao. Aza matahotra ny mieritreritra ivelan'ny boaty, satria ny boaty dia mametra ny sainao amin'ny toerana voafetra fotsiny. Mihoatra an'izay ary eritrereto amin'ny fomba rehetra azonao atao.
ny vato vs ny olombelona dia nialako ny lalao
Arakaraka ny amakianao ny zavatra no ho fantatrao.
Arakaraka ny ianaranao no hahitanao ny toerana halehanao.
(Afaka mamaky amin'ny masoko aho!)
Ny lesona: fomba iray handrehitra ny eritreritrao ny famakiana, ny famakiana ary avy eo hamaky bebe kokoa. Ary ireo toerana alehanao ireo dia tsy tokony ho ara-batana, fa mety ho fanoharana koa. Mianara zava-baovao foana ary tsy ho mankaleo anao mihitsy.
Ka, mihoatra ny Z!
Fotoana tokony hanehoana anao izao
Izay tena tsy fantatrao
Izay rehetra tokony ho fantatra.
(Mihoatra ny Zebra!)
Ny lesona: ny fantatrao dia rano indray mitete any amin'ny ranomasimbe fantatry sy tsy fantatra fotsiny. Zavatra tsara izany satria tsy vitan'ny hoe mitaona anao hanohy hamaky sy hianatra fotsiny ianao, fa terena hanaiky fa misy zavatra tsy takatry ny fahalalana.
Tsy misy fetrany ny zavatra ho fantatrao,
arakaraka ny halaviran'ny zebra alehanao.
Ny lesona: ny sainao dia manana fahaizana mahatalanjona toy izany hianaranao sy hivelarany, ka aza mametraka fetra ferana hatraiza ny halehanao. Aza hadino ny fetra napetraky ny lasa taminao, ary omeo fanamby ny tenanao hahitanao ny halaviranao.
Mankany amin'ny toerana mahafinaritra ianao!
Miandry ny tendrombohitrao,
Ny lesona: miandry anao izao tontolo izao ary tsy misy andro tsara noho ny anio miarahaba azy io. Ny tendrombohitra no fanambin'ny fiainana ary anjaranao ny mitady ny lalana mankany amin'ny tampony.
Reko fa misy karazana fahasahiranana mihoatra ny iray karazana.
Ny sasany avy eo aloha ary ny sasany avy any aoriana.
Fa nividy ramanavy lehibe aho. Vonona daholo aho hitanareo.
Ankehitriny ny olako dia hanana olana amiko!
(Nanana olana tamin'ny fahazoako tany Solla Sollew aho)
Ny lesona: ny làlana eo alohanao dia milahatra fanamby, koa miomàna hiatrika izany. Asehoy azy ireo hoe iza ny sefo ary aza avela hanakana anao tsy ho tonga amin'izay tianao haleha izy ireo.
Androany ianao dia ianao, marina kokoa noho ny marina izany.
Tsy misy olona velona mihoatra anao.
(Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao!)
Ny lesona: tokana ianao eto amin'ity planeta ity ary mitondra zavatra manokana ho an'ireo rehetra mifanena aminao ianao. Ankalazao ny maha-ianao anao ary aza avela ny hafa hanakana anao tsy ho olona tianao.
Tsy momba ny inona izany, fa ny mety hahatongavany.
Ny lesona: ianao dia voa iray manana potika lehibe ary tsy hoe momba ny maha-ianao anao izao na izay anananao, fa ny momba ny mety hahatongavanao raha mahatsapa izany mety ho vitanao ianao.
Ary hahomby ve ianao? Ie! Hanao tokoa ianao!
(98 sy ¾ isan-jato azo antoka)
Ny lesona: raha apetrakao ao ny sainao dia azo antoka ny fahombiazanao. Izany dia mandeha amin'ny zavatra lehibe sy lehibe, na inona na inona famaritana manokana anao momba ny fahombiazana.
Tsy ho hitanao ny zavatra tsara indrindra raha manidy ny masonao ianao.
Ny lesona: tsy maintsy mihazona ny masonao ianao raha tsy izany dia tsy hahita ny fiainana be loatra ianao tsy ny hatsaran'izao tontolo izao manodidina anao ihany, fa ireo fotoana mety hitranga indraindray.
Rahampitso dia iray hafa.
(Trondro iray, trondro roa, trondro mena, trondro manga)
Ny lesona: isaky ny andro vaovao dia vintana hifalifaliana sy hankafizanao. Rehefa tapitra ny andro iray dia aza manantena azy hamihina ilay takelaka banga rahampitso ary ataovy tsara toy izany ihany.
misintona ny bandy rehefa avy akaiky
Raha tsy misy olona toa anao miraharaha zavatra mahatsiravina iray manontolo dia tsy hisy zavatra hihatsara. Io dia tsy.
Ny lesona: izany dia mihatra amin'ny zavatra maro amin'ny fiainana. Na ny fikarakarana asehonao amin'ny olon-tianao amin'ny fotoan-tsainy, na ny fikarakarana asehonao amin'ny olon-tsy fantatra any an-dry zareo, na ny fikarakarana asehonao amin'izao tontolo izao amin'ny fomba ataonao, dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny zavatra ianao.
Aza milavo lefona! Mino anao rehetra aho.
Olona iray ny olona, ​​na kely toy inona aza!
(Horton maheno an'iza!)
Ny lesona: ity dia antso miantso ho an'izay mahatsiaro tena ho tsy afa-manoatra fa tsy henoina. Zava-dehibe ny feonao ary tsy maintsy manandrana mandre azy ianao. Ary ny fihetsikao, na kely toy inona aza, dia misy fiovana lehibe - tadidio izany.
Oh ny zavatra hitanao, raha tsy mijanona ao aoriana ianao!
Ny lesona: rehefa mikotroka mandritra ny androm-piainanao ny lamasinina fiovana, mahereza, mitaingà, ary jereo hoe aiza no itondranao anao. Raha mijanona ao aoriana ianao dia tsy ho fantatrao izay mety ho nisy.
Aza hadino izany rehefa miala, mitandrina am-pitandremana ary mandanjalanja tsara.
Ary tsarovy fa ny lalàna Mihoatra ny mampifandanja ny fiainana.
Ny lesona: tsara kokoa ny fiainana rehefa mahay mandanjalanja ary andraikitranao ny manandrana mitazona izany fifandanjana izany araka izay tratra. Izany dia mihatra amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny fitantanananao ny fotoanao ka hatramin'ny safidinao hifaneraserana amin'ny olon-kafa.
Ianao irery no afaka mifehy ny ho avinao.
Ny lesona: Matetika omena an'i Dr. Seuss (na dia tsy misy fanovozana marina aza), ity teny nalaina ity dia hita taratra amin'ireo lesona voalohany tamin'ity lisitra ity. Mifandraika amin'ny anao izany toerana fanaraha-maso ary ny fomba tokony hahitanao ny tenanao ho tompon'andraikitra amin'ny fiainanao, fa tsy mieritreritra zavatra hitranga aminao fotsiny.
Fantatro fa mando izy ary tsy masoandro ny masoandro,
fa afaka manana fahafinaretana tsara be isika izay mahatsikaiky.
(Ilay saka eo amin'ny satroka)
Ny lesona: tsy ny masoandro sy ny tsiky fotsiny ny fiainana - ny zavatra afaka mandeha any atsimo haingana ary tena manohitra antsika. Fa na dia amin'izao fotoam-pitsapana izao aza dia mbola azo atao ihany ny miala voly mahafinaritra. Ny fihetsikao no mamaritra an'io.
Fantatro, eo an-tampony ianao mahita fahitana mahafinaritra,
fa eto amin'ny farany ambany kosa dia tokony hanana zony koa isika.
(Yertle the Turtle and Other Stories)
Ny lesona: ity iray ity somary somary kely kokoa amin'ny natiora politika. Mampahatsiahy antsika izany fa ny olona rehetra dia samy manana ny zony ary ny fitsaboana mitovy amin'izy samy izy. Na inona na inona fahombiazanao, manankarena, na herinao mahery, ataovy amin'ny hatsaram-panahy sy fangoraham-po ny mpiara-belona aminao.
Fantasy dia ilaina ilaina amin'ny fiainana dia fomba fijerena ny fiainana amin'ny faran'ny teleskaopy diso.
Ny lesona: avy amin'ny resadresaka navoakan'i Seuss, ity dia mamintina ny fomba fiainany. Aza mahita fotsiny izay hitan'ny olon-kafa manandrana mijery zavatra amin'ny fomba fijery hafa koa. Ampiasao izany sainao izany ary ataovy amin'ny fomba vaovao izao tontolo izao.
Tsy ho tara ianao, satria hanana ny hafainganana ianao.
Handalo ny andian-jiolahim-boto iray ianao ary handray andraikitra tsy ho ela.
Na aiza na aiza alehanao, dia ho tsara indrindra indrindra ianao.
Na aiza na aiza alehanao, dia hataonao loha laharana ny ambiny rehetra.
Afa-tsy rehefa tsy manao ianao.
Satria, indraindray ianao tsy hanao.
10 ny zavatra atao rehefa leo ianao ao an-trano
Ny lesona: ny mifaninana sy matoky ny fahaizanao manokana dia tsara, raha mbola manaiky ny zava-misy ianao indraindray dia tsy ho tsara indrindra amin'ny zavatra iray ianao. Manetre tena ary mahatsapa fa tsy afaka ny ho tsara amin'ny zavatra rehetra ianao.
Lazao fotsiny ny tenanao, Duckie, tena tsara vintana ianao!
(Efa nilaza taminao ve aho hoe tsara vintana ianao?)
Ny lesona: Diniho fotsiny hoe tsara vintana ianao amin'ny fananana ireo harena be dia be izay mikoriana amin'ny fiainanao. Mety tsy tsapanao izany, fa ianao kosa betsaka no tokony hisaorana , ary maro no mbola velona miaraka amin'ny kely lavitra noho ianao.
Milaza izy ireo fa efa fomba taloha aho, ary miaina taloha, fa indraindray mieritreritra aho fa mandroso haingana loatra ny fandrosoana!
Ny lesona: misy tombony be dia be raha miadana sy mandany fotoana. Ny tontolo maoderina dia nanome antsika be dia be, fa ny fandrosoana dia tsy manome foana ny tombony heverintsika fa. Mianara maka ravina iray tamin'ny andro lasa.
Matahotra aho fa indraindray
milalao lalao manirery koa ianao.
Lalao tsy azonao handresena
’Satria hilalao aminao izy.
Ny lesona: raha tsy tsapantsika izany dia matetika isika no mety ho fahavalontsika ratsy indrindra. Mibitsibitsika ny teny henjana ao an-tsofintsika isika, manadino ny fahasambarantsika manokana isika ary mandratra tena amin'ny fomba tsy hita isa. Ny fanekena izany zava-misy izany no dingana voalohany hisorohana azy.
Ka sokafy ny vavanao, anaka! Isaky ny manisa feo!
Ny lesona: Mitenena mafy! Lazao izay tsapanao. Tohano ireo antony mihira ao am-ponao. Aza avela ny hafa hiteny momba anao. Aza mieritreritra fa ny hevitr'izy ireo dia zava-dehibe kokoa noho ny anao - tsy izany. Meteza ho feo fiovana tsara.
Raha tsy nanao an'izany ianao dia tokony. Mahafinaritra ireo zavatra ireo, ary mahafinaritra ny mahafinaritra.
Ny lesona: ity dia antso ho an'ny olona akaiky saina mba hanandrana zava-baovao, hisokatra amin'ny fahafaha-manao zavatra vaovao, ary hahita ny fahafinaretana amin'ny zavatra madinidinika rehetra. Raha manontany tena ianao raha tokony, dia angamba ny valiny!
Ianao no ianao. Ankehitriny, tsy mahafinaritra ve izany?
Ny lesona: fantaro fa mihoatra lavitra noho ny fiheveranao ny tenanao ianao, ary mendrika ny fitiavanao sy ny fanekena anao manokana. Raha ny marina, rehefa esorinao any aoriana ny zavatra hafa rehetra, olombelona mendrika sy miahy ianao ary mendrika hankalazana izany.
inona no hatao raha tianao ny ankizilahy
Mieritrereta dia manontany tena, manontany tena ary mieritreritra.
Ny lesona: Aza avela handositra izany fahatsapana fahagagana izany ianao, mitazona azy io, ankafizo, ary avelao hameno izao tontolo izao fientanentanana sy fifaliana.
Avy eo ka hatrany,
manomboka eto ka hatrany,
ny zavatra mahatsikaiky dia hatraiza hatraiza!
Ny lesona: misy fahafinaretana sy fihomehezana hita na aiza na aiza no jerenao, ny ataonao dia ny manokatra ny sainao amin'izany. Na ny zavatra mahazatra indrindra aza dia azo avadika ho traikefa nahafinaritra kokoa.
Androany hitondra tena aho, toy ny hoe anio no hahatsiarovana ahy.
Ny lesona: ny voalohany amin'ny teny nindramina 3 natokana ho an'i Dr. Seuss, dia mampahatsiahy antsika fa ny fihetsika ataontsika dia ho ela velona amin'ny fahatsiarovana ny hafa ary tokony hitondra tena araka izay tiana ho tadidy isika.
Fa maninona no mety rehefa teraka mba hisongadina?
Ny lesona: tsy manam-paharoa ny tsirairay amintsika, koa maninona isika no mandatsaka angovo be dia be amin'ny fiezahana hiditra? Raiso am-bavafo ny kiraronao ary aza matahotra ny hampiseho amin'izao tontolo izao ny tena tenanao - mety tsy hanaiky anao avy hatrany izy io, fa tsy aleo ve miaina fiainana tena izy?
Aza mitomany fa vita io. Mitsikia satria nitranga izany.
Ny lesona: zavatra tsara tsy maintsy ho tonga sy mifarana - toy izany ihany ny fiainana. Aza manadino ny vintan-dratsinao rehefa vita ny raharaha, mankalazà fa afaka nankafy azy ianao nandritra ny faharetany.
Iza amin'ireo teny nalaina avy tamin'ny aingam-panahin'i Dr. Seuss ireo no tianao? Mametraha hevitra etsy ambany hampahafantatra anay.
Ary raha nankafizinao ireo teny fahendrena ireo dia ho tianao ny fanangonana ataonay Winnie-the-Pooh nitanisa , Teny nindramina Roald Dahl , Teny nindramina nataon'i Shel Silverstein , ary Alice in Wonderland nalaina .
inona no holazaina amin'ny taratasim-pitiavana
ny fomba fiasa amin'ny daty voalohany amin'ny olona nihaona taminao tamin'ny Internet
inona no dikan'ny namana amin'ny fiarahana
misy famantarana ve ny mpitaona mpamitaka
lisitry ny teny izay mamaritra ahy